Ny lahatsoratr'i Savannah Marie momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Savannah Marie
Talata, Janoary 21, 2014 Talata, Janoary 21, 2014 Savannah Marie
“Toerana mahafinaritra tokoa ny niarahana mandra-pahatongan'ny olon-drehetra nandeha tany.” Izany dia fitarainana iraisan'ny hipsters. Mizara ny fahasosorany ireo mpivarotra; izany hoe raha soloinao amin'ny teny hoe "mahasoa" ny teny hoe "cool". Ny fantsom-barotra tsara dia mety hahafoana ny famirapiratany rehefa mandeha ny fotoana. Misarika ny saina amin'ny hafatrao ireo mpanao dokambarotra vaovao. Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia mahatonga ny fampiasam-bola ho kely tombony. Ny mpampiasa tsy tapaka dia mankaleo ary miroso amin'ny kijana maitso. Mitazona
Marketing amin'ny atiny maharitra
Alatsinainy Desambra 30, 2013 Talata, Janoary 21, 2014 Savannah Marie
Ny fiarahamonina sy ny fiainana amin'ny ankapobeny dia toa mandeha amin'ny haingam-pandeha; manatratra na tsy mahatratra no teny filamatra ho an'ny orinasa maro. Raha ny marina, ny fiainana amin'ny lalana haingana dia nisy dikany vaovao tamin'ny fanolorana ireo tranonkala misy hizarana atiny fohy - Vine, Twitter ary BuzzFeed dia mpivady fotsiny, ohatra malaza. Noho io antony io dia marika maro no nanova ny fifantohany amin'ny fanomezana fampahalalana ilain'ny mpanjifany amin'ny sombiny fohy
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay, ny infografika dia hita hatraiza hatraiza ary misy antony marim-pototra. Ilaina matetika ny statistika raha ampiana ny crédibilité, ary ny infografika dia manamora ny famongorana ireo angona izay mety ho sarotra be tamin'ny mpamaky antonony. Amin'ny alàlan'ny fampiasana infografika dia lasa fanabeazana ny data ary mahafinaritra aza ny mamaky azy. Fampivoarana Infographic Raha efa ho akaiky ny 2013, ny infografika dia manova indray ny fomba handevonan'ny olona fahalalana. Ankehitriny, tsy misy ny infografika